Kenya oo soo Bandhigaysa Rag loo Qabtay weerarkii Gaarisa – Radio Daljir
Abriil 5, 2015 12:10 b 0
Axad, Abriil 05, 2015 (Daljir) —Dowladda Kenya ayaa sheegtay inay shan qof oo rag ah oo ay la xiriirinayso weerarkii ay Al-shabaab ku qaaday Jaamacada Gaarisa, halkaasoo lagu dilay arday badan, xilli ay Al-shabaab mar kale ku dhawaaqday weerarro kale oo ay Kenya ka geysanayso.
Weerarkii Khamiistii las dhaafay lagu qaaday Jaamacadda Gaarisa ayaa lagu dilay 147-qof oo 142 ka mid ah ay ahaayeen ardaydii Jaamacaddaas dhiganayay. Iyadoo weerarkan lagu sheegay kii ugu dhimasha badnaa ee ka dhaca Kenya tan 1998-kii oo boqolaal qof ay ku dhinteen weerarradii lagu burburiyay safaaraddii Mareykanka ee Nairobi.
Afhayeenka wasaaradda arrimaha gudaha Kenya, Mwenda Njoka ayaa isna sheegay in shanta qof ee loo xiray weerarkan ay ciidamada ammaanka goor hore gacanta dhigeen.
“Shanta qof ee lala xiriirinayo weerarka Jaamacadda Gaarisa waxaa la xiray xilli ay isku dayayeen inay u baxsadan dhanka Somalia,” ayuu yiri Njoka oo la hadlayay warbaahinta. Inkastoo afhayeenku uusan sheegin magacyada dadkan la qabtay, balse wuxuu sheegay in mid ka mid ah lagu magcaabo, Rashid Charles Mberesero uuna kasoo jeedo Tanzania.
“Qof kale oo ka mid ah dadka la qabtay oo lagu qaabtay gudaha dhisamaha Jaamacada xilli uu bambooyin watay ayaa lagu magacaabaa, Cusmaan Cali Dhaqane oo Soomaali-Kenya ah,” ayuu hadalkiisa ku daray Mwenda Njoka.
Sidoo kale, dowladda Kenya ayaa sheegtay inay Maxamed Maxamuud Dul-yadeyn oo ka mid ah xubnaha Al-shabaab ayna ku eedeysay inuu ka dambeeyay weerarkii Jaamacadda Gaarisa ay dul-dhigtay madaxiisa lacag gaaraysa 215,000 oo doollarka Mareykanka ah, si ay xogtiisa u hesho.
Weerarkan ayaa noqonaya mid ka mid ah kuwii ugu khasaaraha badnaa ee ay Al-shabaab ka geysato gudaha dalka Kenya, iyadoo dhanka kale ay ku dhawaaqday kooxdani inay weerarro kale ka geysanayso Kenya haddii aysan ciidamadooda kala bixin Somalia.
Maamulka Gobolka Sool oo Doortay duq Degmo oo Cusub